सीडिओको सनकः प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा - Rubas News
सीडिओको सनकः प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा
Posted by Rubas News | २०७७ चैत्र ३ | मुख्य समाचार, सुदूरपश्चिम प्रदेश |0|
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले सामान्य विवादका कारण प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेपछि कर्मचारी र सीडीओ बीच असन्तुष्टि बढेको छ । आइतबार सेवा प्रवाहको अनुगमनका क्रममा प्रजिअ राम कुमार महतोले आफ्नै कार्यलयको नागरिकता फाँटमा अनुगमन गरेका थिए । सोहि क्रममा सेवा प्रवाहको विषयलाई लिएर सीडीओ र प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र भारती बीच सामान्य विवाद भएको थियो । विवादकै कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रशासकीय अधिकृत भारतीको बैतडी सरुवा गरेका हुन् ।
किन भएको थियो विवाद?
सरकारले सुकुम्बासी तथा अव्यस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरण गर्न आयोग गठन गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता बनाउनेको भिड ह्वात्तै बढेको छ । भिड व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पटक पटक सम्बन्धी फाँटमा आग्रह गरेपनि भीड व्यवस्थित हुन सकेको थिए । जसले गर्दा सेवाग्राहीको गुनासो दिनदिनै बढ्दै गएपछि प्रजिअ महतो सहायक प्रजिअ अशोक कुमार भण्डारी सहित नागरिकता फाँटमा गएका थिए । त्यहाँ सेवाग्राही नै फाँटमा आएर कागजात खोजिरहेको भेटेपछि उनले प्रशासकीय अधिकृतलाई सेवाग्राही भित्र पस्न नदिन र फाँटलाई व्यवस्थित बनाउन आग्रह गरे । तर केहि महिनाअघि सडक दूर्घटनामा परि शारीरिक रुपमा अशक्त भएका प्रशासकीय अधिकृत भारतीले आफू एक्लैले भीड व्यवस्थापन गर्न नसक्ने जिकिर गरे । भारतीको जवाफ सुनेसँगै प्रजिअले उनलाई काम गर्न नसक्ने भए जागिरबाटै राजिनामा दिन भनेको उनको आरोप छ ।
उनले सेवाग्राहीकै अगाडी सीडीओले जागिरबाट राजिनामा नै दिनुस् भनेपछि आफूहरुबीच सामान्य विवाद भएको स्वीकार गरे ।
‘फाँटमा भीडभाड नै छ, दैनिक सयौलाई नागरिकता दिनुपर्छ । म एक्लैले त्यो व्यवस्थित गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन’, प्रशासकीय अधिकृत भारतीले भने ‘सक्दिन भन्दा जागिरबाटै राजिनामा दिनुस् भन्नुभयो । मैले पनि विधि र प्रक्रिया पुर्याएर खाएको जागिर हो । तपाईले दिएको जागिर होइन भने ।’
उता, कञ्चपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम कुमार महतोले भने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दा आफ्नो मात्रै ठेक्का नभएको भन्ने जवाफ दिएपछि केहि विवाद भएको दावी गरे ।
‘मैले सेवाग्राहीलाई भित्र पस्न नदिनुस्, अलि व्यवस्थित गर्नुस भन्दा उहाँले मेरो मात्रै ठेक्का होइन भन्नुभयो’, प्रजिअ महतोले भने ‘त्यसपछि मैले काम गर्न नसक्ने भए सरुवा लिएर जानुस् भन्दा म सक्दिन बरु तपाईले नै सरुवा गदिर्नुस भन्नुभयो । त्यहि भएर नै उहाँको सरुवा भएको हो ।’
सीडीओ व्यवहारले कर्मचारी असन्तुष्ट
सरकारले कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य गर्न पोशाक भत्ता समेत दिदै आएको छ । तर कञ्चनपुरमा अधिकांश कार्यालयका प्रमुखसहित अन्य कर्मचारीहरुले भने पोशाक लगाउने गरेका छैनन् । जसले गर्दा सेवा प्रवाह र पोशाकमा कडाइ गर्न सीडीओ आफै सरकारी कार्यालयहरुमा अनुगमनमा पुग्ने गरेका छन् । पोशाक नलगाएको भन्दै उनले गत महिना भूमी सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई कारवाहिका लागि विभागमा पत्राचार समेत गरिसकेका छन् ।
यस्तै, गत साता जिल्ला समन्वय समितिमा भएको सूचना विभागको कार्यक्रममा समेत उनले पोशाक नलगाउने कर्मचारीलाई कार्यक्रमकै बिच उभ्याएका थिए । जसले गर्दा कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरु समेत सीडीओको व्यवहारप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् ।
त्यतिमात्रै होइन, अनुगमन तथा अन्य कार्यक्रममा समेत सीडीओको बोली र कर्मचारीलाई गर्ने व्यवहारमा मैत्रीभाव नदेखिने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
राम्रोसँग भन्दा टेरेनन्ः सीडीओ
उता प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भने आफू नियम संगत रुपमा प्रस्तुत भएको दावी गरेका छन् । उनले सरकारले कर्मचारी र सेवाग्राही बीचको पहिचानका लागि नै पोशाक भत्ता दिने गरेको बताउदै पोशाक नै नलगाउने कर्मचारीलाई कारवाहि गर्नुको विकल्प नरहेको बताउछन् ।
‘मैले कुनै पनि कर्मचारीमाथी दूव्र्यवहार गरेको छैन । पटक पटक कार्यालय प्रमुखको बैठकमा पनि पोशाक लगाउने कुरालाई कडाई गर्न भनेकै छु । त्यति गर्दा पनि नमान्नेलाई के गर्न सकिन्छ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ‘हरेक कुरा सीडीओ आफैले गदिर्नुपर्छ ? त्यो सम्भव छैन नि ।’
Previousशुल्क वृद्धिको विरोधमा सुप विश्वविद्यालयको पठनपाठन बन्द
Nextहात्ती पिडितलाई सहयोग
तराईमा बाढी र डुबानको समस्या
छांगरुमा इन्टरनेट पुगेपछि….